Masinina fonosana takelaka roa sosona Chengda mahavariana Packaging World (Shanghai) Expo
Tao amin'ny Shanghai New International Expo Center swop 2019 Packaging World Expo ny 25-28 novambra 2019, ny trano heva an'ny Haining Chengda Machinary Co., Ltd. dia voahodidin'ny mpitsidika avy any an-trano sy any ivelany isan'andro. Nanohy nizara ny vaovao farany natolotry ny Chengda Machines ny olona. Sary vondrona o ...
Fampiratiana SWOP 2019
Ny fampirantiana World of Packaging (Shanghai) biennial (SWOP) dia hatao manomboka ny 25 hatramin'ny 28 Novambra. Tsy sehatra manan-danja amin'ny fampisehoana vokatra fotsiny izy io, fa koa fotoana mety indrindra amin'ny fifanakalozana matihanina amin'ny indostrian'ny fonosana. Andao hihaona amin'ny Shanghai New International E ...
Ny milina kaopy taratasy dia mivoatra mankany amin'ny fironana amin'ny fiarovana ny tontolo iainana
Ankehitriny, nanjary lamaody ny fiarovana ny tontolo iainana, ary mivoatra koa ny indostrian'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny iray amin'ireo fanovana miharihary indrindra manakaiky ny ain'ny olona dia ny fiakaran'ny indostrian'ny fonosana taratasy sy fitoeran-taratasy. Misy olana lehibe eo amin'ny famokarana ...
Inona no fantsona mahitsy vita amin'ny alim-pito
Mino aho fa ny olon-drehetra dia tsy zatra intsony amin'ny fonosana fantsom-taratasy, ary ny fantsom-taratasy koa dia matetika ampiasaina amin'ny fiainana isan'andro. Miaraka amin'ny fivoaran'ny fonosana fantsom-taratasy dia misy karazana fantsona taratasy maro kokoa. Anisan'ireny, ny fantsom-taratasy vita amin'ny alimo vita amin'ny alim-pito dia iray amin'ireo karazana malaza indrindra ...
Egypt Exhibition tamin'ny septambra 2018
Anaran'ny fampirantiana: Trano fampirantiana fonosana sy fanontam-pirinty Egypt: R3-3- Efitrano 1B Fotoana: 10-12 septambra 2018 Toerana: Ivotoerana fampirantiana sy fampirantiana any Kairo, Egypt
Teknolojia mitarika, lafiny iraisam-pirenena
Vao tsy ela akory izay, niaraka tamin'ny fisian'ny kamio kaontenera marobe, ny SMD-90 novokarin'i Haining Chengda Machinary Co., Ltd., miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 120 isa-minitra, dia nivoaka tany ivelany indray ary nanondrana tany Gresy, Okraina ary Alzeria. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay dia nampiditra hatrany ny avo-int ...
Inona ireo "fotoana" sy "fanamby" atrehan'ny indostrian'ny fonosana amin'ny valanaretina ankehitriny?
Ny Fetiben'ny Lohataona dia fotoana mety indrindra hiarahan'ny mpianakavy. Ny fankafizanao ny fotoana fisakafoanana mafana miaraka amin'ny ankohonanao sy ny namanao dia tsy maintsy hipoaka ny fivoriana lehibe sy antonony ary kely ary fiaraha-misakafo hariva manerana ny firenena. Azo antoka fa tombony lehibe ho an'ny indostrian'ny fikarakarana sy fivarotana ....
Tsy misy fiatraikany amin'ny fanondranana ny milina fanaronana taratasy Chengda ny valan'aretina
2020-03-02 dia andro tsy mahazatra an'ny Haining Chengda Machinery Co., Ltd. 10 andro monja taorian'ny niverenan'ny asa dia vita soa aman-tsara ny fanondranana milina fanamoriana taratasy maro. Voafetra ny fiantraikan'ny valanaretina amin'ny orinasa. Izany dia noho ny mpitarika ny orinasa izay ...
Mazava ny fe-potoana farany fandrarana sy famerana ny plastika eto amin'ny fireneko!
Ny Vaomieram-pirenena misahana ny fampandrosoana sy ny fanavaozana ary ny minisiteran'ny ekolojia sy ny tontolo iainana dia nanambara tamin'ny faha-19 ny "Hevitra momba ny fanamafisana bebe kokoa ny fitsaboana ny fandotoana plastika". Amin'ny faran'ny taona 2020, ny fireneko no hitarika amin'ny fandrarana sy ny famerana ny famokarana, sal ...